घुमेर अघाइन्न पोखरा, पोखरामा घुम्नै पर्ने ठाउँहरु – Gandaki News
अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको काखमा अवस्थित फेवाताल र पोखरा उपत्यका धेरै पर्यटकको रोजाइमा पर्छ । पोखरा, प्रकृतिको सुन्दर उपहार । एउटा सानो उपत्यकामा मन बहलाउने धेरै चिज छन् । हिमाल, ताल, गुफा, मन्दिर, गुम्बा, नदी र झरना प्रकृतिका देन हुन् । प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, बन्जिजम्प र जिप फ्ल्याएर जस्ता मानवनिर्मित साहसिक खेल यहाँका आकर्षण छन् ।
नेपालमा आएका पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशत पर्यटक पोखरा आएकै हुन्छन् । पोखरा त्यतिकै पोखरा भएको होइन । पोखराको ट्रेडमार्क नै हो फेवातालमा माछापुच्छ«े हिमालको छायाँ । हिमाली शृंखला, हिमाल र पोखरासँग धेरैथरी विशेषता जोडिएका छन् । पोखराबाट माछापुच्छे« हिमालसम्मको हवाई दुरी ३३ किलोमिटर मात्रै छ ।
यति अग्लो हिमाल र यति नजिकको सहर विश्वमा विरलै भेटिन्छ । संसारका सबैभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये ३ वटा पोखराबाटै देख्न सकिन्छ । धौलागिरि, अन्नपूर्ण र मनास्लु हिमाल ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला चुचुरा हुन् । पोखरामा फरक—फरक स्वादमा घुन्न पाइने ठाउँ छन् ।
फेवाताल, बेगनासताल र तालहरु
पोखराको पहिलो आकर्षण भनेको फेवाताल हो । जहाँ डुंगामा सयर गर्दै सुन्दर प्राकृतिक दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ । माछापुच्छ«े हिमालको प्रतिविम्ब तालमै पौडी खेलेको देख्न सकिन्छ । त्यसमाथि तालको बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिर पनि पर्यटकका लागि पहिलो गन्तव्य बन्दै आएको छ । डुङ्गामा बसेर फेवाको फन्को नलगाएसम्म पोखरा आएको सार्थकता हुँदैन । डुङ्गा चढेर तालवराही मन्दिर जानु जति बाध्यता हो, त्योभन्दा बढी त्यसले दिने आनन्द हो । पोखरामा फेवाताल मात्रै नभएर अर्काे सुन्दर ताल बेगनास पनि छ । त्यसैगरी पोखरा उपत्यकामा अरु ताल पनि छन्—कमल, रूपा, खास्टे, दिपाङ, गुँदे, मैदी र न्युरेनी । यी तालका आआफ्नै विशेषता छन् ।
पोखराको जुनसुुकै ठाउँबाट उत्तरतर्फ हेर्दा सेता हिमालहरु देख्न सकिन्छ । पोखराबाट माछापुच्छे« हिमालसम्मको हवाई दुरी ३३ किलोमिटर मात्रै छ । पोखरामा कफिको बसाइ सगँ वाइनका सुताइ सम्म हिमाल हेर्न पाइन्छ । संसारका सबैभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये ३ वटा पोखराबाटै देख्न सकिन्छ । धौलागिरि, अन्नपूर्ण र मनास्लु हिमाल ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला चुचुरा हुन् । त्यहाँबाट कुमारी माछापुच्छ«े, पुठ्ठा हिउ“चुली, धौलागिरि प्रथम, मोदित्से, साउथ अन्नपूर्ण, घान्द्रुक हिउँचुली, फ्याङ, नीलगिरि, अन्नपूर्ण प्रथम, अन्नपूर्ण तेस्रो, अन्नपूर्ण चौथो, अन्नपूर्ण दोस्रो, मर्दी, लमजुङ, मनास्लु लगायत दर्जनौं हिमाल देखिन्छ ।
पोखराम ताल जस्तै गुफाहरु पनि धेरै छन् । पोखरा – १७ छोरेपाटनमा गुप्तेश्वर गुफा धेरै पर्यटक जान गुफा पनि हो । दुई भगम विभाजित गुफाको पहिलो भाग ४० मिटर लामो छ । त्यहाँभित्र महादेबमन्दिर छ । त्यस पछि गुफामा करिब १ सय ४० मिटर पसेपछि भित्रैबाट डेभिज फल्स देखिन्छ । त्यसै गरि पोखरा–१६ बाटुलेचौरमा महेन्द्र गुफा छ । गुफाभित्र १ सय २५ मिटरसम्म सजिलै जान सकिन्छ । महेन्द्र गुफाबाट ७ सय मिटरको दुरीमा रहेको यो गुफाको नाम चमेरे गुफा हो । चमेरेगुफा १ सय ५० मिटल लामो छ ।
पोखरामा पाँच वटा संग्रहालय छन् । सबै भन्दा बढि पर्यटकहरुको पहिलो रोजाइ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय हो । रातो पहिरोमा पर्वतीय जनजीवन चिनारी दिने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय हो । त्यसै गरि गोरखालीको बहादुरी सम्झाउने संग्रहालय केआइसिंह पुल छेवैमा छ । शक्तिघाटमा गुरुङ जनजीवन झल्काउने संग्रहालय क्होइबो छ । त्यसै गरि पृथ्वीनारायण क्याम्पस हाताको नेचुरल हिस्ट्री म्युजियम पुतली संग्रहालय बनेको छ । त्यहाँ छ सय प्रजातिका पुतली छन् । नयाँ बजारमा क्षेत्रीय संग्रहालय छ, जहाँ पश्चिमाञ्चलको जनजिवन झल्काउने गरि राखिएको छ ।
धार्मिक पर्यटकलाई ठाउँ
पोखरा पर्यटकहरु विभिन्न बहानामा आउने गर्दछन् । पोखरा धार्मिक रुपमा पनि पर्यटकहरु आउने गर्दछन् । पोखराका विन्ध्यवासिनी, ताल बाराही, भद्रकाली मन्दिर, कास्की कालिका, अकला देबी मन्दिर रहेका छन् । त्यसै गरि विश्व शान्ति स्तुपा, माटेपानी गुम्बा, हेम्जा गुम्बा, जामे मस्जिद, रामघाट चर्च लागयतका छन् । घुम्नलाई तिब्बती शरणार्थी क्याम्प छ । हेम्जा, पृथ्वीचोक र छोरेपाटनमा ।
प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, जिपलाइन र बन्जीजम्प
हावामा कावा खादै पोखरा र हिमाल नियल्नका लागि पनि आधुनिक माध्येमको प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्याराग्लाइडिङ मार्फत पोखरा हेर्नका लागि सराङकोटबाट उड्न फेवा किनारम झर्न सकिन्छ । पोखरा विमानस्थलबाट ३ वटा अल्ट्रालाइट कम्पनीले पोखरा देखाउन आकाशमा उडाउ छन् । त्यसै गरि सराङकोटबाट जिपलाइनबाट हेम्जा झरेर बन्जिजम्प गर्न सकिन्छ ।
वियोग सम्झउने छाँगो
छोरेपाटनस्थित पातले छाँगो पर्यटकको रोजाइमा पर्दछ । २०१८ साउन १५ गते फेवाबाँधबाट आएको भेलले श्रीमती डेभीलाई बगायो । छाँगोभित्र खसेर उनको मृत्यु भयो । त्यही सयमदेखी छाँगोलाई डेभीज फल्स भन्न थालियको हो । त्यसको पानी भूमिगत भई एक किलोमिटर दक्षिण फुस्रे खोलामा गएको छ । यो छाँगो हेर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउने गर्दछन् ।
सूर्योदय र धर्तीमुनि लुकेको सेती
पोखराको सराङकोट सूर्योदयका लागि पख्यात ठाउँ । सराङकोटबाट सूर्योदय, हिमाल, पोखरा र ताल हेर्न दैनिक पर्यटकहरु जाने गर्दछन् । त्यसै गरि पोखराका सूर्योदयका लागि शान्ति स्तुप, काहुडाडाँ पनि प्रख्यात छन् । पोखराको मध्येभागबट बगेको सेती नदि केआई सिंहपुल देखि कालीखोला दोभानसम्म, नारायणथानदेखि तुलसीघाटसम्म र रामघाटदेखि ढुङेसाँघुम्म धर्तीमुनि लुकेर सेती नदि बग्ने गरेकी छन् ।
यी बाहेक अरु पनि घुम्ने ठाउँ छन् पोखरामा ।
सुरु प्रकाशित: सागरराज तिमिल्सिना, ganthan.com मा February 23, 2016
पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न नयाँ आकर्षण आवश्यक छः मन्त्री बराल
आर्मीका दुबै टिम टाइगर कप भलिबल फाइनलमा
पोखरामा जुवा मुद्धाका मिलाइदिने भन्दै ५ लाख ठग्न खोज्ने २ जना पक्राउ
It;s good to highlight the beauty of Pokhara which really deserves praise. But care should be taken that the beauty of Inlay lake in Myanmar is far more attractive than Pokhara’s Phewa Lake, not because it is less beautiful but because the lake provides more modern amenities to tourists such as motor boats, sailing restaurants and beautiful lightings and Pagodas around. Similarly, the caves in cities like Pyin Oo Lwin (Formerly Maymyo) are far more decorated with lightings, facilitated footpaths, thousands of beautiful Buddha statues and beautiful decorations. How much more beautiful would our lakes and caves look if we paid attention to provide more amenities and facilities to tourists?